ထူးခြားဖြစ်စဉ် သတင်းတိုများ (Gazette & other events) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ထူးခြားဖြစ်စဉ် သတင်းတိုများ (Gazette & other events)
ထူးခြားဖြစ်စဉ် သတင်းတိုများ (Gazette & other events)
Posted by white on Oct 28, 2010 in Community & Society, Critic, Drama, Essays.., Events/Fundraise, Gossip, Rumor, News | 8 comments
Gazette & other events
(၁) (21.10.10) နေ့တွင် နိုင်ငံတော် အလံသစ်ကို နေပြည်တော် ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ အပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လွှင့်တင်ခဲ့သော်လည်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နိုင်ငံလူဦးရေဧ။် လေးပုံသုံးပုံခန့်မှာ ထိုသတင်းကို မသိရှိကြသေးကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၂) အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများကို ပြည်သူလူထု ဖတ်ရှုလေ့လာမှုနည်းပါး သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ သတင်းအမှန်များကို များသောအားဖြင့် အမှောင်ချထားသဖြင့် စိတ်မ၀င်စား သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူအများမှာ တီဗီမှ နေ့စဉ်ပြသပေးနေသည့် ကိုရီးယားဇာတ်ကားများအပြီး သတင်းလာချိန်တွင် ပိတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၃) ထိုသတင်းကို ကြားသိပြီးသူအများစုမှာလည်း နိုင်ငံတော် အလံသစ်ကို ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးပေးနေကြ ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် gazette ထဲတွင် စာဖတ်သူများဧ။် comments များဖြင့် အလံသစ်ကို ထင်မြင်ချက်ပေး ကြခြင်းမှာ လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၄) အလံသစ်တွင် ၀ါ၊စိမ်း၊နီ အရောင်သုံးရောင်နှင့်အတူ ကြီးမားသည့်ကြယ်ဖြူတစ်လုံး ပါရှိကြောင်း၊ အ၀ါ ကတော့…..ရွှေ၊ အစိမ်းက ကျောက်စိမ်းနှင့် အနီကတော့ ပတ္တမြားပေါများပြီး ကြယ်ဖြူကတော့ ထိုအရာများမှာ ပြည်သူပိုင်မဟုတ်ဘဲ အကုန်လုံးသူတို့လက်ထဲမှာသာ ရှိသည့် အဓိပ္ပာယ်ဟု ထင်မြင်နေကြကြောင်း၊ အလံတော်သစ်ကိုလည်း ယတြာအစီအစဉ်ဖြင့် လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှတ်တမဲ့ကြည့်ပါက အလံမှာ မီးပွိုင့်ဧ။်အရောင်များကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ထင်မြင်ကြကြောင်း၊ ထိုအလံကို မီးပွိုင့်တွင်သာ တပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးခဲ့သော နိုင်ငံတော်အလံဟောင်းကို နိုင်ငံပိုင် မော်ကွန်းတိုက်တွင် မှတ်တမ်းအဖြစ် သေချာစွာ သိမ်းဆည်းထားသင့်သော်လည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အများစုမှာ အတော်ပင် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း၊ ယခု အလံသစ်မှကြယ်ဖြူကို ဖြုတ်လိုက်ပါက Lithuania နိုင်ငံအလံပင် ဖြစ်နေကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၅) လာမည့် (7.11.10) နေ့တွင် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူအများ မှာ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေကြကြောင်း၊ မဲပေးလျှင်လည်း မည်သည့်ပါတီကို မဲပေးရမည်ကို မသိရှိဘဲ နေကြကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုဧ။် အချစ်တော် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုလည်း မဲပေးဖို့ ဆန္ဒမရှိကြကြောင်း၊ စေတနာ၊ မေတ္တာဖြင့် ပြည်သူလူထုအကျိုးကို သယ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ မဲရရှိရေးအတွက်သာ လုပ်ဆောင်နေသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှာလည်း တဖြည်းဖြည်နှင့် ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်သဖွယ် ဖြစ်နေကြောင်း၊ လူထုကြား မှာလည်း မဖြစ်မနေမဲပေးရပါက “သူတို့ မဟုတ်ရင် ပြီးရော” ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရန် စိတ်ကူးနေကြ ကြောင်း၊ တစ်ချို့မှာ မဲမပေးဘဲနေရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၆) ကြံ့ဖွံ့ပါတီဧ။် ပြည်သူလူထု အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများမှာလည်း စံနမူနာထားလောက်ဖွယ် ဖြစ်နေကြောင်း၊ ရေစကြိုမြို့နယ်တွင် မျက်စိဝေဒနာခံစားရသူများအား ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ တစ်တပ်တစ်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီဆေးကုပေး ခဲ့ရာ တစ်ချို့မှာ မျက်စိလုံးဝကွယ်သွားသည်ဟု ကြားသိရကြောင်း၊ တစ်ချို့မှာ မျက်စိကိုပင် ထုတ်ပစ် လိုက်ရသည်အထိ ဖြစ်သွားသည်ဟု အံ့ဖွယ်သတင်းအဖြစ် ကြားသိရကြောင်း။ မန္တလေးမြို့နယ်အချို့တွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုဖြစ်ချိန်တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ လူထုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် ဒုက္ခရောက်နေသူများထံမှ မဲရရှိရန်သာ ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးရွာအချို့သို့ ဆန္ဒ္ဒမဲရရှိရန် စည်းရုံးရေးဆင်းသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ နယ်မြေ စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံတစ်ဦး အပါအ၀င် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် (၃) ဦးမှာ လူအများလိုက်ပါလာသည့် သင်္ဘောပေါ်တွင် ကွက်ကြားမိုးသဖွယ် မိုးကြိုးပစ်ခံရကြောင်း၊ အခြားခရီးသည် များမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းမရှိဘဲ ထို ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် (၃) ဦးသာ ပြည်သူ့လူထု၏ စေတနာ ရောင်ပြန်ဟပ်ခံရ သည့်သဘောဖြင့် မိုးကြိုး ထိမှန်ခံရကြောင်း၊ နောင်အခါ လူအများမှာ ခရီးသွားရင်း မိုးကြိုးပစ်ခံရမှာ ကြောက်သည့်အတွက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်ဖြစ်ပါက သင်္ဘောပေါ်သို့ တက်ရောက်စီးနင်းခွင့်ကိုပင် ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၇) ရန်ကုန်မြို့နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပြည်သူလူထုကြားမှာလည်း လူတွင်ကျယ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီသာ ဆန္ဒမဲရရန် ထင်တိုင်းကြဲ လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း၊ အခြားပါတီများမှာ စည်းရုံးရေးပြုလုပ်နိုင်ရန်ပင် ခက်ခဲလွန်းသည်ဟု ကြားသိရကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သည့် တရားမျှတခြင်းကင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့် လေ့လာလိုသူများကိုလည်း ဗီဇာထုတ်မပေးဘဲ ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ထားကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၈) ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် လူထုစားသုံးသည့် အကြော်များတွင်လည်း ရေသန့် ပလပ်စတစ်အကြည်ဗူးများနှင့် ပလပ်စတစ်အကြည်အိတ်များကို ထည့်ကြော်ကာ ၀ိသမလောဘသား အကြော်ရောင်းသူများဧ။် စီးပွားဖြစ် နည်းစနစ်တစ်ခု ထွန်းကားနေကြောင်း၊ ထိုအကြော်များကို စားသုံးမိသူတို့မှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကင်ဆာရောဂါနှင့် အခြားရောဂါဆိုးများကို ခံစားရနိုင်ကြောင်းကို ဆရာဝန်များမှ မှတ်ချက်ပေးကြကြောင်း၊ ယခုအခါ အကြော်သည်များကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၉) မကွေးမြို့နယ် ဆားတိုင်ကန်ကျေးရွာတွင် မေထူးအမည်ရှိသည့် ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါသော နွားမလေး တစ်ကောင် မွေးဖွားကြောင်း၊ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါသည့်အတွက် ထူးခြားသည့်အပြင် ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းမည့်အတိတ်နိမိတ်လား၊ ဆိုးမည့်အတိတ်နိမိတ်လား ခွဲခြားရန် ခက်နေကြကြောင်း၊ ကောသလမင်းအိမ်မက် (၁၆) ချက်ထဲမှ အတိတ်နိမိတ်တစ်ခုကဲ့သို့ (ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားသည်ဟု မြင်မက်သော အိပ်မက်)ကို ဘုရားရှင် ရှင်းပြရာတွင် နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည်နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို
မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့) နိမိတ်သည် ယခုခေတ်ကို တိုက်ရိုက်ဖော်ညွှန်းထားသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆနေကြကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
(၁၀) ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည်နှင့်အမျှ ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် internet အသုံးပြုသူများအတွက် “စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် သုံးရန်အင်တာနက်” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အည်ီ လွန်စွာ နှေးကွေးလွန်းသည့်စနစ် ဖြင့် အသုံးပြုနေရကြောင်း၊ gmail နှင့် gtalk မှာ လုံးဝဖွင့်၍မရကြေင်း၊ တစ်ချို့မှာ gmail ကို internet proxy ကျော်ခွသည့်နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဖွင့်နေရကြောင်း၊ internet သုံးစွဲသူများအတွက် လွန်စွာ အခက်တွေ့နေကြ ကြောင်း၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအပါအ၀င် နိုင်ငံတော်တွင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာရပ်များ ထွန်းကားစေရန်၊ ကမ္ဘာနှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံတော်၏စေတနာကြောင့်ပင် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ လွန်စွာ နှေးကွေးနေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည့်အတွက် ယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုကြား သတင်းများ လက်ဆင့်ကမ်းသိရှိနိုင်မည့်အရေးထက် နိုင်ငံတကာနှင့် လျှင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် internet ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို တမင် နှေးကွေးအောင် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကြားသိရခြင်း။
ထပ်မံရရှိသည့် သတင်းများကို စာရေးသူမှ ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ……..။
A. W has written 41 post in this Website..
"A beauty of life not depend on how happy you are, but depend on how the others happy because of you."
View all posts by white →
ဒီသတင်းရေးနည်းလေး ကြိုက်ပါတယ်..။ သေချာမသေချာတာကတော့ တပိုင်းပေါ့နော..။
ဟုတ်တယ်၊ ဒီရေးနည်းလေးကောင်းတယ်။ နိုင်ငံရေးတင်မက သူတို့အတွင်းရေးတွေပါ သိသလောက် အတင်းအနေနဲ့ ရေးရင်လည်းကောင်းမယ်။
မဲပေးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တချို့တရံ ကြားခဲ့ရတာကတော့..
ငါကတော့ ဘာထည့်ရမယ်မှန်းတော့ မသိဘူး.. အေး.. ငါကတော့ အရုပ်လှတဲ့ ပါတီ ထည့်လိုက်မယ်.. ပြောင်နောက်သည်လား တကယ်လား.. ဒါတော့ မသိပါ..
ငါကတော့.. ကြံဖွတ်ကလွဲ တခြား ထည့်မယ်.. ပေးစရာ မရှိရင် ပါယ်မဲ ဖြစ်အောင် စာရွက်ကို လျောက်ခြစ်ပစ်မယ်..
ငါကတော့.. ကြံဖွတ်က နိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာနေမှတော့.. နိုင်မဲ့ ဆီဘဲ ထည့်တော့မယ်..
ငါတော့..ဘာထည့်ရမှန်း အခုထိ မဝေခွဲနိုင်သေးဘူး.. အနားနီးမှ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ပြီး ထည့်မယ်..
ငါကတော့.. မဲသွားပေးမယ်.. မဲမပေးဘဲ နေတာများရင် နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀.. သွားပြန်အုံးမည်။
ငါကတော့.. မဲပေးမယ်.. ရှိတဲ့ ပါတီ ကြံဖွတ်မှလွဲ.. မဲပေးမယ်.. လွတ်တောမှာ တခြားပါတီတွေ ရှိနေရင်တော့ နဲနဲတော့ လွတ်လပ်မှု တခုအနေနဲ့.. ရနိုင်လေမလား.. ဘာပဲ ပြောပြော နောက် ၄နှစ် ဒီအလေ့အထ အတိုင်းဆို ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်လို့ရပြီ.. နောင် ၄နှစ်အတွက် မဲ ပေးပြီး ဒီတခါရင်းတော့မယ်..
Hi there Is it okay if I goabit off topic? I’m trying to view your blog on my new Blackberry but it doesn’t display properly, any suggestions? Shall I try to find an fix for my browser or something? Thanks! Celena x
ထူးတာတွေထက် ပို၍ ဆန်းရမည်..။
ကမ္ဘာလုံးကြီးထဲမှာ မြန်မာပြည်က မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစီး သန်း(၆၀) ကို စီး၍ ပြကြပါတော့မည်…။ မကြာမှီ လာမည်.. မျှော်ပါ..။ ဟဲ..ဟဲ..(ဆပ်ကပ် ရော.. မျက်လှည့်ရော.. ပူးတွဲ ကြော်ငြာ နေတာပါ..။)
အကောင်းလေးနဲ့အဆိုးလေးနဲ့ ၊၊
ကျွန်တော်က သရော်စာရေးဟန်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ Gazette ထဲက သတင်းတွေ၊ post တွေ၊ comments တွေကို စုစည်းပြီး သရော်စာရေးဟန်ပုံစံနဲ့ ဒီ post လေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ရွှီး … ဖြောင်း.ဖြောင်း.ဖြောင်း…. အားပေးတယ်။ နောက်သတင်းတွေကိုလဲ ဆက်ရေးပေးပါလို့